မြန်မာ့ရောင်စဉ် - သံဟိတ်
Excellent Students of Htoo Foundation Education Merit Hostel Awarded Outstanding Award
Outstanding award presenting ceremony to students of Htoo Foundation education merit hostel who passed matriculation exam excellently was hold on July 10, at Htoo Foundation education merit hostel meeting room.
Htoo Foundation chairman U Tay Za, Putao general administrator U Tun Wai and concerning person, general secretary Daw Htwe Htwe Win, U Paw Myin Oo, CEO of the foundation and concerning person, patrons of Putao and awarded students attended this ceremony.
Friday, 18 July 2014 07:02
ယနေ့ ဇူလိုင်လ (၁၇)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ထူးဖောင်ဒေးရှင်း နာယက ဦးတေဇသည် ဇူလိုင်(၁၈)ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ သံလျင်မြို့နယ်၊ ထာမလုံ လက်ယက်စမ်း ကျေးရွာရှိ အဂ္ဂါပေမေတ္တာ ပရဟိတ ဂေဟာ (Myanmar Young Crusaders) သို့ သွားရောက်ပြီး ငွေကျပ်သိန်း(၅၀)နှင့် ငွေကျပ် (၇၃)သိန်း တန်ဖိုးရှိ တူရိယာပစ္စည်းများကို ဂေဟာတာဝန်ရှိသူများထံ ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
ထို့ပြင် မိဘမဲ့ကလေး (၁၃၉)ယောက်အား တစ်ဦးလျှင် ဒေါ်လာ (၅၀)နှုန်းဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၆၉၅၀)နှင့် ဂေဟာ ပဒေသာပင်အတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ(၃၀၅၀) စုစုပေါင်း အမေရိကန် ဒေါ်လာ(၁၀၀၀၀) ကို ထပ်မံ လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
Friday, 18 July 2014 03:26
နယ်သာလန်နိုင်ငံမှ မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ပျံသန်းသည့် မလေးရှား လေကြောင်းလိုင်းမှ ခရီးသည် ၂၉၅ ဦး တင်ဆောင်လာသည့် ဘိုးရင်း ၇၇၇ လေယာဉ် MH-17 သည် ရုရှားနယ်စပ်အနီး ယူကရိန်းပိုင်နက်ထဲတွင် မြေပြင်မှ ဝေဟင်ပစ်ဒုံးကျည်ဖြင့် ပစ်ချခံခဲ့ရကြောင်းနှင့် လေယာဉ်ပေါ်လိုက်ပါလာသူအားလုံး သေဆုံးသွားကြောင်း နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနများက အရေးပေါ်ကြားဖြတ်သတင်းအဖြစ် ဖော်ပြသည်။
Thursday, 17 July 2014 04:38
ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်က ၁၈ ရက်အတွင်း ရန်ကုန်မြို့က လူစည်ကားတဲ့နေရာဒေသတွေမှာ အာဇာနည်နေ့ကို မမေ့ကြဖို့နဲ့ အာဇာနည်ကြီးများ ကျဆုံးချိန် မနက် ၁၀ နာရီ ၃၇ မိနစ်မှာ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကို အလေးပြုကြဖို့ စတစ်ကာကမ်ပိန်းလုပ်တာလို့ Generation Wave အဖွဲ့က ကိုသူရိန်က ပြောပါတယ်။
Thursday, 17 July 2014 04:13
Myanmar – Thailand Friendship ဆုရ သျှားထွဋ်အိန္ဒြာ ဆုကြေးငွေထဲမှ ငွေတချို့ကို လှူဒါန်း
Myanmar-Thailand Friendship Awardဆု ရရှိခဲ့သည့် သျှားထွဋ်အိန္ဒြာက ၎င်းရရှိခဲ့သည့် ဆုကြေးငွေထဲမှ တချို့ကို ဘုန်ကြီးကျောင်း များသို့ လှုဒါန်း ခဲ့ကြောင်း ပြောသည်။
"အကန့်အသတ် မရှိပေမယ့် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ ဘုရားတွေမှာ လှူဖြစ်တယ။် Miss Myanmar Universe ပြိုင်ပွဲကြီး ပြီးရင်တော့ ညီမ ထပ်မံ လှူဒါန်းဖို့ အစီအစဉ် ရှိပါသေးတယ်။ ဒီပွဲ အတွက် စိတ်ရောကိုယ်ပါ နှစ်ထား ရတဲ့ အတွက် ဒီပွဲပြီးမှ ထပ်လှူဖြစ်မှာပါ။ ပထမဆုံး ရတဲ့ ဆုကြေးကို လှူချင်လို့သာ ညီမ အရင် လှူလိုက်တာပါ "ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
Thursday, 17 July 2014 04:07
Thursday, 17 July 2014 03:44
Thursday, 17 July 2014 03:35
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လေစွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပန်ကာများ တီထွင်နေ
စင်ကာပူ အခြေစိုက် EUROLITE TEC- HNOLOGIES PTE, LTD က မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ကိုက်ညီမည့် လေစွမ်း အင်သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ် အားထုတ် ပန်ကာအရွယ်အစားများကို တီထွင် နေပြီး ထွက်ရှိလာပါက သင့်တော် သည့်ဈေးနှုန်းဖြင့် တင်သွင်းရောင်းချ သွားရန် စီစဉ်နေကြောင်း သိရသည်။
Thursday, 17 July 2014 03:31
အခွန် မဆောင်သူတွေ၊ ထိန်ချန်သူတွေကို ထောင်ဒဏ် ပြစ်ဒဏ်ချမယ်လို့ ပြည်တွင်းအခွန် ဦးစီးဌာနက အကြီးတန်း အရာရှိတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
အရင်ကတော့ အခွန် မဆောင်သူတွေ၊ ထိန်ချန်သူတွေကို ငွေဒဏ်ပဲ ချမှတ်တယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
You are here: HomeSportsသံဟိတ်